Tuesday July 21, 2020 - 11:45:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbixinno cusub oo soo baxay ayaa sheegaya in dhalinyaro calooshood ushaqeystayaal Soomaali ah ay ka qeyb qaadanayaan dagaalka ka holcaya wadanka Liibiya.
Maleeshiyaad Suuriyaan ah oo Turkigu tababaray
Wasiirrada difaaca ee dowladaha Turkiga iyo Qadar ayaa dhowaan tababarro usoo xiray ciidamo boqolaal ah oo muddo bilo ah lagu carbinayay saldhig melleteri oo kuyaal duleedka magaalada caasimadda ah ee Dooxa.
Khaluus Akaar oo ah wasiirka G/dhigga xukuumadda Anqara ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay ciidamada cusub ee dowladda Qadar ay soo saaratay, ciidamadan oo ubadan dhalinyaro Soomaali ah balse lasiiyay dhalashada Qadar ayaa lafilayaa in loo daabulo dhanka wadanka Liibiya.
Wargeyska Libya Review ayaa daabacay warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan dowrka ay calooshood ushaqeystayaasha Soomaalida ah ku yeelan doonaan dagaalka Liibiya.
Warbixinadu waxay sheegayaan in dowladaha Qadar iyo Turkiga ay dagaalka ka dhici doono magaalada Sirta u adeegsan doonaan dagaalyahanno udhashay wadamada Suuriya iyo Soomaaliya kuwaas oo lasiiyay Jinsiyadaha Turkiga iyo Qadar.
Libya Review wuxuu soo qaadanayaa warbixin kasoo baxday wasaaradda G/dhigga Mareykanka oo walaac ka muujisay kaalinta Qadar iyo Turkiga ay ku leeyihiin dagaalka Liibiya iyagoo adeegsanaya dagaalyahanno ay dibadda kasoo kiraysteen, ciidama tiradoodu udhaxayso 3500 illaa 3800 ayay labadan dowladood ku taageereen xukuumadda Alwifaaq ee dalka Liibiya ka jirta.
Xukuumadaha Dooxa iyo Anqara ayaa galaangal weyn ku leh siyaasadda iyo ammaanka Soomaaliya waxayna taageero lixaad leh siiyaan dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira.
Saldhigga Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa sanad walba tababarro usoo xira boqolaal askari halka Qadar ay dibadda udhoofiso dhalinyaro Soomaali ah kuwaas oo aan masiirkooda la ogayn halka uu ku dambeyn doono, maleeshiyaadka qaarkood ayaa la sheegay in lasiiyay jinsiyadda Qadar laguna biiriyay ciidanka wadankaas halka kuwa kale loo daabulay dalka Liibiya sida ay sheegayaan warbixinada soo baxaya.